Waxaan helayaa qalad "Out of Memory" markii aan dayactirayay PST /OST faylka. Maxaa la sameeyaa - DataNumen
Ciladan micnaheedu waa PST-gaaga /OST Faylka aad ayuu u ballaaran yahay oo booska xusuusta ee nidaamkaagu kuma filna inuu ka soo kabsado. Guud ahaan, qaladkani wuxuu ku dhacaa kombiyuutarada hoose, iyo PST /OST faylka ayaa ka weyn 50GB.
Waa kuwan xalalka qaar khaladka "Out of Memory"
Ku rakib badeecadeena kombuyuutar kale oo leh qalabayn fiican oo qalab ah iskuna day markale. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho kombiyuutar 64bit leh in ka badan 64GB xasuusta iyo 64bit Outlook oo lagu rakibay si hawsha loo qabto. Wixii 64bit Muuqaalka ah, waxaad isticmaali kartaa 64bit DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery kaas oo si buuxda u isticmaali doona xusuusta nidaamkaaga.
Hubso inay ku filan yihiin meelo disk bilaash ah oo ku yaal C: wadistaada. Windows wuxuu u adeegsan doonaa meelaha disk-ka ee C: kaxeynta sida xasuusta dalwaddii. Haddii aysan jirin meelo disk ku filan oo bilaash ah oo ku yaal C: wadista, markaa waxaad sidoo kale la kulmi doontaa dhibaatada noocaas ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku hayso ugu yaraan 100GB boosaska bilaashka ah ee diskkaaga C: wadista.
Ama waad isticmaali kartaa DataNumen File Splitter inaad kala jarto PST-gaaga /OST fayl u gal dhowr qaybood, midkiiba qiyaastiisu dhan tahay 10GB cabir ahaan. Kadib orod DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery si loo dayactiro PST /OST faylalka mid mid ama dufcaddii ugu maraya hawsha "Dufcaddii Dayactirka". Si kastaba ha noqotee, xalkaan, waxaad waayi kartaa xoogaa xog ah markaad kala qaybineyso PST /OST faylka iyo emayllada qaarkood waxay ku sugan yihiin soohdinta faylka, laakiin waad ka hortagi kartaa qaladka "Out of memory" qaladku wuu dhacaa oo wuu soo kabsadaa most xogta.
64bit, DataNumen File Splitter, meelaha banaan, Xusuusin la'aan, Kala badh